My iPhone agaghị n'Aka! Nke a bụ The Real Idozi. - Nchaji
kedu ihe ndị na -ejide nrọ pụtara
esi kpọghee iphone x
mmelite ios rapaara na akara apple
My iPhone agaghị akwụ ụgwọ! Nke a bụ The Real Idozi.
Mgbe iPhone agaghị akwụ ụgwọ, ọ bụ nnukwu ihe. Abụ m onye bụbu onye ọrụ Apple, na oge m na Storelọ Ahịa Apple, idozi nsogbu iPhone na-akwụ ụgwọ bụ akụkụ dị ukwuu nke ọrụ m kwa ụbọchị. Ozi ọma ahụ bụ na ọtụtụ nke iPhone odori nsogbu nwere ike ofu n'ụlọ . N'isiokwu a, m ga-egosi gị esi edozi iPhone nke na-agaghị akwụ ụgwọ , nzọụkwụ-site-nzọụkwụ.
Ike Tọgharia iPhone
Lelee eriri ọkụ gị maka mmebi
Gbalịa A Dị Iche Iche iPhone chaja
Ghichaa ihe na-adọkpụ na ọdụ ụgbọ mmiri iPhone gị
Tinye iPhone Gị n’ime DFU Ọnọdụ Ma Weghachi
Pairrụzi gị iPhone
Mara Nke a Tupu I Bido
Otu n'ime ajụjụ ndị Apple techs na-enwetakarị mgbe iPhone agaghị akwụ ụgwọ bụ nke a: 'Ọ bụrụ na iPhone m agaghị akwụ ụgwọ, achọrọ m batrị ọhụrụ?'
N'agbanyeghị ihe ị ga-agụ n'ọtụtụ weebụsaịtị, azịza maka ajụjụ a bụ ọ bụghị! Enwere otutu ihe omumahie n'ebe ahu, na nke ahu bu otu n’ime ihe ndi mere m jiri choo ide edemede a.
kedu ihe na -agwụ ike iphone m batrị 6
Dịka onye bụbu Apple tech nwere ahụmịhe na-arụ ọrụ na ọtụtụ narị iPhones na-agaghị akwụ ụgwọ, enwere m ike ịgwa gị nke ahụ dochie batrị bụ kpam kpam ihe ọjọọ ime .
Eziokwu bụ na ọtụtụ oge, ọ bụ nke gị iPhone sọftụwia - ọ bụghị ngwaike - nke ahụ na-egbochi iPhone gị ịkwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na iPhone gị agaghị akwụ ụgwọ, 99% nke oge ahụ, dochie batrị ga-enwe efu mmetụta!
Ma, ọ bụrụ na e nwere bu nsogbu ngwaike, o yikarịrị ka okwu a na ọdụ ụgbọ mmiri na-akwụ ụgwọ n'onwe ya - mana anyị anọghị ebe ahụ.
Ọ bụrụ n ’ị ga - elele karịa ịgụ, vidio vidio YouTube ga - agagharị gị site na ndozi ahụ.
Etu esi edozi iPhone nke na-agaghị akwụ ụgwọ
1. Ike Tọgharia iPhone
Mgbe ụfọdụ ihe ngwọta dị mfe dị ka ike resetting gị iPhone. Nke ahụ bụ ihe mbụ Apple tech ga-eme na Storelọ Ahịa Apple, ọ dịkwa mfe ịme n'ụlọ. Nke a bụ otu:
Olee otú Iji Ike Tọgharia iPhone
Olee otú Iji Ike Tọgharia
iPhone 6S, 6S Plus, SE, na ụdị ndị okenye Pịa ma jide bọtịnụ ike na Igodo ụlọ ọnụ ruo mgbe Apple logo na-egosi na ihuenyo, wee hapụ.
iPhone 7 na 7 gbakwunyere Pịa ma jide bọtịnụ ike na olu ala button ọnụ ruo mgbe Apple logo na-egosi na ihuenyo, wee hapụ.
iPhone 8, 8 gbakwunyere, X, XS, XS Max, na XR E nwere usoro atọ: 1. Pịa ọsọ ọsọ ma hapụ ndị olu elu button . 2. Ngwa ngwa pịa ma hapụ ya olu ala button . 3. Pịa ma jide bọtịnụ ike (a na-akpọ 'bọtịnụ n'akụkụ' na iPhone X) ruo mgbe akara Apple gosipụtara na ngosipụta ahụ, wee hapụ.
Apple tech ndụmọdụ: The # 1 ndudue ndị mmadụ na-eme mgbe na-agbalị ike tọgharịa ha iPhone bụ na ha anaghị ejide bọtịnụ ahụ ogologo oge. Na iPhone 8 na X, Otú ọ dị, jide n'aka na ị na-agbanye bọtịnụ abụọ mbụ ngwa ngwa ma na-ejide bọtịnụ ike ruo ogologo oge. Mgbe ụfọdụ usoro ahụ nwere ike were 20 sekọnd ma ọ bụ karịa!
kedu ịdọ aka na ntị sitere n'aka ndị uwe ojii
Ọ bụrụ na nke ahụ anaghị arụ ọrụ, echegbula! Anyị ga-amaba n'ime ndozi ngwaike na nzọụkwụ ọzọ.
2. Lelee Igwe Ọdụdọ Gị Maka Mmebi
Lelee anya nke ọma na ngwụcha nke eriri USB ị na-eji na-akwụ ụgwọ iPhone gị. Apple’s àmụmà eriri na-adịkarị mfe ịpịgharị, karịsịa na njedebe nke jikọtara na iPhone gị. Y’oburu n’ichoo ihe iriba ama di iche iche, odi ka odi ugbua.
Kedụ ka m ga - esi mara ma eriri m àmụmà ọ bụ ya kpatara iPhone m agaghị akwụ ụgwọ?
Ọ bụrụ na enweghị mmebi anya na mpụga nke eriri ahụ, gbalịa ịpịnye iPhone gị n'ọdụ ụgbọ USB na kọmputa gị iji kwụọ ụgwọ kama iji nkwụnye mgbidi na-abịa na iPhone gị. Ọ bụrụ na ị na-ama na-ana gị iPhone iji kọmputa gị, na-agbalị iji mgbidi nkwụnye. Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ n'otu ebe ma ọ bụghị nke ọzọ, eriri gị abụghị nsogbu.
Nke a nwere ike iyi ihe doro anya, mana oge ụfọdụ ụzọ kachasị mma iji chọpụta ma ị nwere 'eriri USB' dị gbalịa ịchaji iPhone gị site na iji eriri enyi . Ọ bụrụ na iPhone gị na-apụta na mberede na ndụ mgbe ị pịnyere ya, ị chọpụtala ihe kpatara iPhone gị agaghị akwụ ụgwọ - eriri na-ezighi ezi.
Echefula banyere akwụkwọ ikike nke iPhone gị!
Ọ bụrụ na iPhone gị ka nọ n'okpuru akwụkwọ ikike, eriri USB (yana ihe ọ bụla dị na igbe iPhone) kpuchie! Apple ga-eji dochie eriri igwe ọkụ gị n'efu, ọ bụrụhaala na ọ dị mma.
You nwere ike ịtọlite ​​nloghachi na ebe nrụọrụ weebụ na-akwado Apple ma ọ bụ kpọọ ụlọ ahịa Apple dị na mpaghara gị iji mee oge na Genius Bar. Ọ bụrụ na ị kpebie ịga na Storelọ Ahịa Apple, ọ bụ ihe dị mma mgbe niile inwe oge ị ga-anọ na Genius Bar tupu ị banye. N’ụzọ ahụ, ị ​​gaghị echere n’ahịrị - ma ọ dịghị ihe ọzọ ruo ogologo oge.
3rd-atọ Gịnị nwere ike ikwu na iPhone odori nsogbu
Otu n’ime ihe ndị kachasị kpatara iPhone agaghị akwụ ụgwọ na-abịa site na eriri dị mma nke atọ nke atọ nke ndị ọzọ nke ndị mmadụ na-azụ n’ọdụ gas. Eeh, eriri Apple dị oke ọnụ, mana na ahụmịhe m, ndị ọkpọ $ 5 ahụ anaghị ejide dị ka ezigbo ihe. Ebe ahụ dị ndị ọma nọ ebe ahụ - ị ga - amata ndị ị ga - ahọrọ.
Ọdịdị dị elu, eriri dị ọnụ ala mee idi!
Ọ bụrụ na ị na-achọ a elu-edu nnọchi iPhone odori USB nke ahụ na-adịgide adịgide karịa nke Apple, lelee ọkacha mmasị anyị na Amazon. Ndị a abụghị eriri ọdụ gas dị ọnụ ala nke ga-agbaji n'izu. Enwere m mmasị na eriri 6 Lightning cable n'ihi na ọ dị ogologo ka m nwee ike iji iPhone m n'ihe ndina.
3. Gbalịa A Dị Iche Iche iPhone chaja
You na-ana gị iPhone site ịkwụnye ya n'ime mgbidi, na-eji a chaja ụgbọ ala, na a ọkà okwu n'ọdụ ụgbọ mmiri, na gị na laptọọpụ, ma ọ bụ n'ụzọ ndị ọzọ? Enwere otutu nke ụzọ dị iche iche iji kwụọ ụgwọ iPhone.
iphone m agaghị edobe ụgwọ
Cheta na ọ bụ ngwanrọ iPhone gị kwuru 'Ee' ma ọ bụ 'Mba' ịgba ụgwọ mgbe iPhone gị jikọtara na ngwa. Ọ bụrụ na software na-achọpụta rụọ ike fluctuations, ọ ga-egbochi gị iPhone si odori dị ka a na-echebe ụfọdụ.
Kedụ ka m ga - esi mara ma chaja m bụ ihe kpatara iPhone m agaghị akwụ ụgwọ?
Anyị ga-eme otu ihe ahụ anyị mere mgbe anyị nyochara eriri Lightning gị. Simplezọ kachasị mfe iji chọpụta ma chaja gị ọ dị njọ bụ ịnwale ọzọ. Jide n'aka na ị gbalịrị ihe karịrị otu n'ihi na chaja nwere ike ịbụ obere ego.
Ọ bụrụ na iPhone gị agaghị akwụ ụgwọ ihe nkwụnye mgbidi, gbalịa tinye ya n'ime ọdụ ụgbọ USB na kọmputa gị. Ọ bụrụ na ọ gaghị akwụ ụgwọ na kọmputa ahụ, gbalịa ịmịnye ya na mgbidi - ma ọ bụ nwaa ọdụ USB ọzọ na kọmputa. Ọ bụrụ na gị iPhone ebubo otu nkwụnye ma ọ bụghị nke ọzọ, mgbe ahụ chaja gị bụ nsogbu.
Enwere ezigbo chaja dị elu n'ebe ahụ, mana ị ga-akpachara anya
Ọ bụrụ na ịchọrọ chaja ọhụrụ, lelee chaja ndị anyị na-akwado iji otu njikọ ahụ dị n'elu (maka eriri). Oke amperage Apple kwadoro maka iPhone chaja bụ 2.1 amps. N'adịghị ka ọtụtụ ndị ọzọ chaja ndị ọzọ nwere ike imebi iPhone gị, ndị a ga-akwụ ụgwọ iPhone gị ọsọ ọsọ na n'enweghị nsogbu.
(Ihe chaja iPad bu 2.1A ma Apple kwuru na odi OK nke iPhones.)
Ntuziaka: Ọ bụrụ na ị na-anwa ịkwụ ụgwọ site na iji keyboard Apple ma ọ bụ hub USB, gbalịa ịgbanye iPhone gị ozugbo na otu n'ime ọdụ ụgbọ USB USB gị. Ngwaọrụ niile agbanyela na ntanetị USB (na kiiboodu) na-ekerịta ike dị oke. Ahụwo m n'onwe m iPhone na-akwụ ụgwọ nsogbu na-eme n'ihi na enweghị ike zuru ezu iji gbaa gburugburu.
4. Ghichaa ihe na-esi na Port Charging nke iPhone gị
Jiri tọọchị ma lelee ọdụ ụgbọ mmiri na-akwụ ụgwọ na ala nke iPhone gị. Ọ bụrụ na ị na-ahụ irighiri ihe ọ bụla ma ọ bụ egbe na ebe ahụ, ọ nwere ike igbochi eriri ọkụ ọkụ site na ịme njikọ siri ike na iPhone gị. Enwere ọtụtụ njikọta n'ebe ahụ (eriri ọkụ ahụ nwere 9), ma ọ bụrụ na egbochi onye na-ezighị ezi, iPhone gị agaghị akwụ ụgwọ ma ọlị.
Ọ bụrụ na ịchọta lint, egbe, ma ọ bụ irighiri ihe ndị ọzọ na ọdụ ụgbọ mmiri nke iPhone gị, oge eruola ka ị kpochapụ ya. Needchọrọ ihe na-agaghị eduzi ụgwọ eletriki ma ọ bụ mebie eletrọniki na ala nke iPhone gị. Nke a bụ aghụghọ:
Jidere otu eze (nke ị na-ejitụbeghị mbụ) ma jiri nwayọọ hichapụ ọdụ ụgbọ mmiri iPhone gị. Mgbe m nọ na Apple, anyị jiri brushes mgbochi mgbochi na-eme ọfụma iji mee nke a (nke ị nwere ike ịbanye na Amazon maka ihe na-enweghị isi), mana ezé ezé na-arụ ọrụ nke ọma.
Na-eme ihe mmebi mmiri mmiri
Otu n’ime ihe ndị kachasị kpatara iPhone agaghị akwụ ụgwọ bụ mmebi mmiri mmiri. Mmebi mmiri nwere ike belata njikọ ndị dị na ọdụ ụgbọ mmiri nke iPhone gị na-akpata ụdị nsogbu dị iche iche na iPhone gị. Ọbụna ma ọ bụrụ na i kpoo ọdụ ụgbọ mmiri ma kpochapụ egbe ahụ, mgbe ụfọdụ, emebi emebilarị.
5. Tinye iPhone Gị n’ime DFU Ọnọdụ Ma Weghachi
Ọbụna ma ọ bụrụ na iPhone gị agaghị akwụ ụgwọ, DFU weghachite ka nwere ike ịrụ ọrụ! Eliminated kpochapụrụ ohere nke mfe nsogbu ngwanrọ ma lelee eriri USB gị, chaja, na iPhone n'onwe ya, yabụ ọ bụ oge maka mbọ ikpeazụ - DFU weghachi. A DFU weghachi bụ a pụrụ iche ụdị weghachi (mgbe ị weghachi iPhone gị, ị na-ehichapụ ihe niile dị na ya wee weghachite ya na ntọala ụlọ ọrụ) nke nwere ike idozi nsogbu ngwanrọ siri ike - ọ bụrụ ha dị adị.
Lelee edemede m banyere esi DFU weghachi ihe iPhone ịmụta otú itinye gị iPhone n'ime DFU mode, na-agafe mkpịsị aka gị tupu ị na-agbalị. Mgbe m rụrụ ọrụ na Apple, nke a bụ ihe mbụ m ga-anwale, ọbụlagodi mgbe ekwentị gosipụtara na ọ ga-emebi. Enwere obere ohere na DFU iweghachi ga-eme ka iPhone na-enweghị ọrụ dịghachi ndụ.
Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, bịaghachi ebe a iji mụta maka ụfọdụ nnukwu nhọrọ ndozi ị nwere ike ịmaghị.
6. Mmezi gị iPhone
Ọ bụrụ na ị gaa na Storelọ Ahịa Apple iji rụkwaa iPhone gị ma enwee mmebi nke mmiri ma ọ bụ nke anụ ahụ, naanị nhọrọ ha nwere ike ịnye bụ iji dochie iPhone gị niile. Ọ bụrụ na ịnweghị AppleCare +, nke a nwere ike ịdị oke ọnụ, ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị nwere foto, vidiyo, ma ọ bụ ozi nkeonwe ndị ọzọ na iPhone gị na iPhone gị agaghị akwụ ụgwọ, Apple ga-asị na ha agaala ruo mgbe ebighị ebi. N'ụzọ dị mma, enwere nhọrọ ndị ọzọ:
Nhọrọ Mmezi Ọzọ
Ọ bụrụ n’ịchọrọ idozi iPhone gị taa, Pulse bụ nnukwu, ọnụ, arụ-ọrụ mmezi. Ha ga-ezute gị n'ụlọ ma ọ bụ ọnọdụ ị họọrọ n'ime obere oge dịka 60 nkeji.
Puls na-enye oge ndụ na akụkụ na ọrụ, ị ga-akwụ ụgwọ naanị mgbe ha mezue mmezi ahụ. Ha na-enyekwa nhọrọ iji rụkwaa ọdụ ụgbọ mmiri iPhone gị na ihe ndị ọzọ pere mpe nke Apple agaghị emetụ. Enwere ohere ị ga - enwe ike iweghachite data gị ma chekwaa ego kwa!
Full nghọta: Anyị na-enweta Ozi Ntuziaka ego ma ọ bụrụ na ị họrọ ịrụzi gị iPhone na Puls. Nke ahụ kwuru, ekwenyere m n'ezie na ha kachasị mma ma dị mfe maka ọtụtụ mmadụ.
iPhone Nchaji Ọzọ!
Enwere m olileanya na iPhone gị amaliteghachiri na ndụ ma ị nọ n'ụzọ ịlaghachi na ụgwọ zuru oke. Ọ ga-amasị m ịnụ n'ọnụ gị gbasara ahụmịhe gị na-edozi nsogbu iPhone na-akwụ ụgwọ, ana m ebe a iji nyere aka n'okporo ụzọ.
ihe Akwụkwọ Nsọ kwuru gbasara ịkpọpu akụkụ